Ankara’da Öğrencilere Abonman İndirimli Kart Dönemi | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီAnkara ရှိကျောင်းသားများအတွက်စာရင်းပေးသွင်းသူများအတွက် Discount Card ကာလ
ကျောင်းသားများ၏စီးပွားရေးကိုဆက်လက်ပံ့ပိုးသွားမည်ဟုဖော်ပြပြီးမြို့တော်ဝန်Yavaşက 20 သည်အောက်တိုဘာလတွင် 60 TL အတွက် 200 ဘော်ဒါကျောင်းလခကျောင်းသားကဒ်ကိုစတင်သုံးစွဲလိမ့်မည်ဟုညွှန်ကြားခဲ့သည်။
"လစဉ်စာရင်းပေးသွင်းမှုလျှော့ Card ကို" လျှောက်လွှာကိုခြောက်နှစ် 27 စနစ်အားမှတ်ပုံတင်နှင့်ကျောင်းသားများအကြိုးခံစားနိုင်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဆင့်မြင့်ပညာရေးကော်မတီအနေဖြင့်အများဆုံးချွေ subscription ကိုကဒ်များထဲမှတူရကီနှင့်တူရကီအတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အတွက်အသုံးပြုလိမ့်မည်ဟုယူဆ။
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 250 သောင်းကျန်းသူကျောင်းသားများအကျိုးခံစားရမည်
ပထမ ဦး စွာလစဉ်ကြေးပေးသွင်းခြင်းလျှောက်လွှာကိုကျောင်းသား၊
EGO ဘတ်စ်ကားများသည်အင်ကာရာ၊ မက်ထရိုနှင့်တယ်လီဖုန်းတို့အတွက်သက်ရောက်မှုရှိသည်
လစဉ်ကြေးပေးသွင်းခြင်းလျှော့စျေးကတ်သည်ပုဂ္ဂလိကအများပိုင်ဘတ်စ်ကားများမှအပ EGO ဘတ်စ်ကားများ၊ မက်ထရို၊ ANKARAY နှင့်ကေဘယ်လ်ကားများသာသက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်။
စာရင်းပေးသွင်းထားသည့်ကျောင်းသားကဒ်သည်မော်တော်ယာဉ်နှင့်ဘူတာတစ်ခု၌ပထမနှင့်ဒုတိယပျံတက်ခြင်းအကြား 30 မိနစ်ကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ဒုတိယဘော်ဒါဆောင်ကို 30 မိနစ်အတွင်းတွင်လုပ်လျှင် subscription application ကိုမရနိုင်ပါ။
လစဉ်ကျောင်းသားစာရင်းပေးသွင်းထားသည့်ကတ်သည် ၀ ယ်သည့် နေ့မှစ၍ နောက်လ၏တစ်ရက်တည်းတွင် 23.59 အထိသက်တမ်းရှိသည်။
EGO ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနသည်ကျောင်းသားများအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးလျှောက်လွှာဖြစ်ရန်နှင့်သိပ်သည်းမှုနှုန်းကိုကာကွယ်ရန်အလို့ငှာစာရင်းပေးသွင်းခြင်းကိုတပ်ဆင်ပေးသည်။
Kocaeli တဲ့ Metropolitan သတိပေးချက်များမှကျောင်းသားများအဘို့အလျှော့စျေး 11 / 12 / 2018 လျှော့စျေးကျောင်းသားကဒ်ဗီဇာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော Kocaeli မြို့တော်စည်ပင်သာယာပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာန '' ခရီးသွားကဒ်များ '' ကိုဆက်လက်ပြုလုပ်နေသည်။ 1 ဇန်နဝါရီလ 2019 အထိဗီဇာမဲ့ကျောင်းသားကတ်ပြားအမျိုးအစား…
လျှော့စျေးကတ်များကိုသူ၏ခေါင်းပေါ်ကိုမီးရှို့! 19 / 12 / 2013 လျှော့စျေးကခေါင်းခေါင်းလောင်း - စည်ပင်သာယာမြေအောက်ရထားရှိ4လူတစ် ဦး အားမြှို့နယ်ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးအစောင့် 4.9 TL ပျက်စီးမှုသို့7နှစ်ထောင်ဒဏ်တောင်းခံခဲ့သည်။ လုံခြုံရေးအရာရှိက“ ကျွန်ုပ်သည်karshılıkအတွက်တုန့်ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း၊
အဆိုပါတိုးချဲ့ခြင်း Tarith Kocaeli တဲ့ Metropolitan ကျောင်းသားလျှော့ခရီးသွားဗီဇာကတ်အရောင်းအဝယ် 15 / 12 / 2016 ကျောင်းသားများအတွက်လျှော့စျေးခရီးသွားကဒ်အတွက် Kocaeli မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကတ်ပြားဗီဇာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ Tarithini ကိုတိုးချဲ့: Kocaeli မြို့တော်စည်ပင်သာယာဌာနပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာန 15 ဒီဇင်ဘာလနိုဝင်ဘာလ 31 သည်အထိစတင်ခဲ့သည်။
ကျောင်းသားများသည်မေလ 19 တွင် 'Bursa Bayram လျှော့စျေးအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခမဲ့ 17 / 05 / 2019 ကျောင်းသားများအတွက် 19 မေAtatürkအထိမ်းအမှတ်၊ လူငယ်နှင့်အားကစားနေ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်အများပြည်သူသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်သည်အစီအစဉ်ကိုလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုခွင့်ပြုခြင်းကို Metropolitan မြူနီစီပယ်၏မဲဖြင့်တညီတညွတ်တည်းအတည်ပြုခဲ့သည်။ Metropolitan Municipality ၏မြို့တော်ဝန်ayı
လျှော့စျေး Den တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများမှ istanbulkart အနိုင်ရ 13 / 09 / 2019 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun girişimiyle başlatılan indirimli ulaşımın kapsamı genişletildi. İBB Meclisi, üniversite sınavında bir bölüme yerleşemeyen öğrenciler ile MEB’de sözleşmeli olarak çalışan öğretmenlerin de indirimli mavi karttan yararlanmasına karar…
Kocaeli တဲ့ Metropolitan သတိပေးချက်များမှကျောင်းသားများအဘို့အလျှော့စျေး
ကျောင်းသားများသည်မေလ 19 တွင် 'Bursa Bayram လျှော့စျေးအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခမဲ့
22 နယူးစီးတီးကတ်ပြားများသည် Kocaeli ရှိကျောင်းသားများအားပေးအပ်သည်
Konya သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ချိတ်ဆက်မှု Card အားခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ်